CANADIAN CANADIAN: SHARAX, TAAKULEYN IYO DARYEEL, SAWIRRO - SOOSAARKA DALAGGA
Tilmaamaha daryeelka ee Tsugoya Canadian
Milkiilaha gurigiisa ama dhismaha gaarka ah wuxuu ku dadaalaa inuu meeshan u noqdo mid raaxo leh iyo sida ugu habboon ee nasashada ruuxi ahaan iyo jir ahaanba. Dhammaan waxaas ayaa la qabanqaabin karaa iyada oo la adeegsanayo goobta dhismaha.
Hawo qabow, urta cirbadaha geedaha, jawi nadiif ah - tani waa waxa ugu dambeyntii naga caawineysa inaan nasano. Maqaalkani waxaan ka wada hadli doonaa geedka dhirta caanka ah ee la yiraahdo Canadian Canadian, iyo sharaxaada hoos ku qoran iyo xeerarka daryeesha geedku waxay kaa caawinayaan in ay koraan quruxda daaqada.
Geedkan waxaa laga heli karaa tiro badan oo ku yaalla waqooyiga Ameerika iyo Aasiya, laakiin maanta waxaa lagu koray adduunka.
Ma taqaanaa? Botanistaha Faransiiska, Eliel Abel Carriere, 1855, ayaa loo magacaabay magac aan caadi ahayn oo geedka. Laakiin markii ugu horeysay ee warshadda waxaa loo keenay suugaanta sayniska hore, 1763. Tani waxaa sameeyay Karl Linnaeus, isaga oo ku magacawday "Pinus canadensis", oo ku jirta luqada Laatiinka "Canadian Canadian".
Geedkani waa mid dheer oo caato ah, isagoo gaadhaya 20 ilaa 30 mitir oo dhererkiisu yahay 0.6 illaa 1.2 m. Taajku wuxuu leeyahay qaabka kookada. Laamuhu way yar yahiin dhulka waxayna bilaabaan inay koraan qaybta sare ee jirkeeda.
Fidiya, cirbado aan dheereyn oo geed ayaa leh muuqaal xiiso leh: hal gacan, cirbadaha ayaa midabka midabkoodu yahay midab madow, oo dhinaca kale waxay leeyihiin laba jibbaar kuwo isbarbar socda, midab yar, mugdi yar oo mug leh.
Cones waa qaabka oval-ga, oo aan ka badnayn 2.5 cm oo dherer ah. Geedka waxaa ku jira gabdhaha iyo labka dheddig-laboodka kuwaas oo u muuqda xiliga dayrta. Geedku wuxuu muhiimad weyn u leeyahay nidaamka deegaanka ee meeraha, gaar ahaan dhulka Mareykanka iyo dadka deegaanka. Waxay leedahay mudo dheer oo koritaan ah.
Waxaa loo isticmaalaa ma aha oo kaliya dhirta, laakiin sidoo kale berrinka dhuxusha, daawada iyo dhirta.
Caleenta qorraxda ah sida berriga yaryar, mikrobiota iskutalaab ah, geedo (buluug, qoryaha, qoryaha, qoryaha), geed qoryaha kedar elfin, qoryaha, foortaatiga, qoryaha, juniper, geed (madow, Weymouth, buur) si quruxsan u qurxin beertaada.
Sida horay loo xusay, zsugu waxaa loo abuuri karaa mid madaxbannaan. Waxaa jira noocyo badan oo qurxoon (qiyaastii lixdan), waxayna ku soo jiidanayaan maadooyin yar yar, laamoodo laamood iyo midabyo leh cirbado.
Waa in la ogaadaa in geedku uu dareemayo wanaag xagga hooska, oo leh dhaxan daran, carrada qoyan iyo qoyan. Laga soo bilaabo qaybaha xayawaanka, mid ayaa laga heli karaa noocyo kale oo cufan ah, iyo xataa xayawaanka.
Taas awgeed, kala duwanaanta codsiga tsugi ee naqshadda muuqaalka waa mid ballaaran. Sidaa daraadeed, hoosta waxaan soo bandhignaa liis kooban oo ah noocyada kala duwan ee diidmada Canadian.
Ma taqaanaa? Waxaa xiiso leh, kaliya 5 maalmood oo qorrax leh sanadkiiba ayaa ku filan koritaanka caadiga ah.
Iftiin, qurux badan oo geed dheer ah, "Ammerland" waxay leedahay laydh cagaaran oo laamo ah. Haddaba "iftiin" caleemaha cusub ee cirbadaha. Tani waa quruxda dhabta ah ee cagaarka. Dhererka, ma noqon doonto in ka badan 100 sentimitir. Taajirku wuxuu leeyahay qaabka boqoshaada, iyo laamihii geed weyn oo dhererkiisu hoos u hooseeya oo dhererkiisu dhererkiisu dhan yahay, iyo da'da yar yar waxay ku qaadataa meel hagaagsan.
Wuxuu si fiican u koraa carrada bacrin ah iyo qoyan. Way fiicantahay haddii aad daboolayso dabaylaha iyo qorraxda qiiqa.
Kala duwanaantan waa nus mitir ka dheer Ammerland. Baaxadda buuggan waa 1.8 m. Sannadgu wuxuu koraa 1.5 sentimitir.
Cirbadaha cagaaran ee cagaaran ayaa si aad ah u kala firirsan laamaha kala duwan, oo ku tiirsan dhulka oo abuuraya nooc koofiyadeed.
Noocaan noocaan ah ayaa si dhab ah loo abuuray si loo qurxiyo jardiinooyinka cagaaran ee guryaha iyo guryaha dalka. Cuf "Cole" si adag u daboolaya dhulka, oo udubdhigaya qaabka laf-dhabar udubdhexaadka ah si xajin leh hoos miisaankiisa.
Goobta ugu fiican ee dhulku waa dhagaxyo waaweyn ama jidadka. Koritaanka dhirta waa mid aad u yar, qiyaastii nus mitir 10 sano. Wareegga dhirta - aan ka badnayn hal mitir.
Ma taqaanaa? Ereyga "tsuga" wuxuu ka yimid Japan, sida dadka maxalliga ah loogu yeero mid ka mid ah noocyadan noocan ah ee geedaha cagaarka ah, iyo "Canadian" waxa loola jeedaa kaymaha Kanadiyaanka ah, halkaas oo xajmiga uu leeyahay dabiicad u gaar ah.
Cabbiradan cawska ah ilaa hal mitir iyo bar dherer ah ayaa loo eegaa by beeralay badan oo badan oo ay sabab u tahay midabka caleemaha cusub - halkan waa jilicsanaan, iyo cad cad oo leh casaan marka cirbadaha ay leeyihiin hooska diiran ee cagaaran.
Moments of color mid gaar ah ayaa lagu arkay xilliyada dayrta iyo jiilaalka. Si aad caleemaha u korodho tiro badan, waxaa lagu talinayaa in la gooyo xabagta. Burburku wuxuu u koraa si qarsoodi ah, oo leh taaj iyo mid taajka ah.
Mid kale oo ka mid ah wakiilada gaarka ah ee xawaaraha Canadian waa noocyada Jeddeloh. Tani waa nuqul dwarf ah, oo leh qaab wareegsan. Waxay ku fiican tahay qurxinta daaqadaha ama xuduudaha ayadoo ay ugu wacan tahay koritaanka hooseeya.
Dhirta waxaa lagu qurxiyaa cirbado dheer oo jilicsan oo leh midab cagaaran. Burburku wuxuu si tartiib ah u koraa: dherer ah nus mitir ayaa la gaarayaa 10 sano kadib.
Warshadu maaha mid deg deg ah cimilada, laakiin waxay jecel yihin meelaha aan hawadu lahayn iyo si fiican u engegay, carrada qoyan.
Ma taqaanaa? Dareerka ugu sarreeya ayaa laga helay Canada, oo kor u kacday ilaa 53.4 mitir.
Bushka yar ee aadka u cufsan "Jervis" wuxuu si tartiib ah u koraa. Waxaa lagu gartaa cufnaanta laamaha iyo madow, midab buluug ah oo cirbad ah. Muuqaalka noocyada noocan ah ayaa sidoo kale lagu gaaraa sababtoo ah nidaamka kala-baxsan ee cirbadaha ku yaal laanta.
Dhererkoodu waa 30 illaa 50 sentimitir. Taajirku wuxuu ku jiraa qaabka Ahraamta. Waxay jeceshahay hooska iyo si fiican-bacriminta, carrada qoyan. Iyada oo qiyaasta yar, waxay si fiican u eegi doontaa jardiinooyinka iswada leh iyo kuwa yaryar, oo ku yaal buuraha alpine ama dhagaxyada.
Aragtida Hussii ayaa sidoo kale lagu kala soocaa kobaca tartiib tartiib ah. Isla mar ahaantaana wuxuu gaaraa dherer ah 2 mitir iyo nus mitir. Crohn ee qaabka Ahraamta ah, laakiin waa la khafiifiyay. Cirbadu waxay leeyihiin midab madow oo si adag loona diyaariyaa laanta.
Tani waa noocyo nuugan oo yaab leh, kuwaas oo sannado badan ay ku kordhinayaan tobanaan mitir oo mitir ah, laakiin waqti isku mid ah waxaa lagu kala saaraa cufnaanta sare ee cirbadaha cagaaran ee qurux badan.
Warshad qaangaar ah oo aan ka badnayn 30 sentimitir dherer. Tani waxay ku habboon tahay in lagu qurxiyo beerta, taas oo la siin karo qaab qaabaysan, laamaha gooyaa.
Boodhka shimbiraha ah ee "Moll" wuxuu koraa dhererka illaa 120 sentimitir, laakiin dhexdhexaadiyuhu wuxuu gaari karaa laba iyo badh mitir. Sannad-kobcintu waa ilaa 5 sentimitir.
Laamaha dhererku wuxuu koraa qallalka iyo jihooyinka kala duwan: laamaha qaarkood waxay qaataan jihada wareegsan, qaarna hoos ayey u dhacaan. "Moll" waxay jecel yihiin qorraxda iyo hooska, iyo kulaylka iyo barafka.
"Nana" - doorashada ugu habboon ee lagu qurxiyo beerta. Noocyada cirifka ayaa koraaya mid, marar dhif ah ilaa laba mitir waxayna leedahay qaab wareeg ah oo wareegsan oo la isku hagaajin karo sida loo rabo.
Midabka cirbadaha waa cagaar madow, caleemaha cusub waxay dhalaalayaan cagaar cad. Qaab dhismeedka aadka u sarreeya ee irbadda wuxuu ka dhigayaa mid aad u iftiimaya oo siman. Laamuhu hoos ayey udhigmeen waxayna koraan si weyn.
Dhirta ayaa doorbidaa hooska iyo si fiican u qaboojiso barafka. Carrabku waa inuu qoyan yahay, iyadoo la raaciyo dhoobo ama ciid.
Ma taqaanaa? Hemlock waxaa loola jeedaa dhirta qadiimiga ah. Waxa jiray 40 milyan oo sano ka hor.
Noocan ah qurxinta xayawaanku wuxuu ka sarreeyaa qaybihii hore - waxay gaadho 2 ilaa 4 mitir oo dherer iyo ballac.
Nooca noocaan ah waxaa lagu helaa simmetrical, oo la siiyaa xaqiiqada ah in laamaha koraan fawdo ahaan. Midabka cirbadaha waa cagaar madow, yar oo buluug ah. Cirbadaha waa mid aad u yar oo qaro weyn leh.
Qurxinta kale ee beerta waxay noqon kartaa muuqaalka "Stockman Cork". Dhererka, xajmigani wuxuu ku koraa 50 sentimitir, kor u kaca sanad walba waa 3 sentimitir.
Si firfircoon u koraya "Stockman Cork" oo ballaaran, ilaa 1 mitir. Taajatadu aad ayay u cufan tahay, sida cirbadaha gaaban, ballaaran oo si aad ah loogu diyaariyey laanta.
Waxaa fiican in aan dib loo soo celin noocyadaas, maadaama ay tahay "xishood". Waxay si fiican u koraan qaybta hoose, ee carrada lagu bacrimiyo iyo u adkaysato dhaxan daran.
Markaad go'aansatid noocyo kala duwan, waa inaad dooran kartid si aad u beerto beertaada beertaada. Tani waxay noqon kartaa meel mugdi ah, hooskii qayb ahaan ama meel qorraxda tooska ah.
Waa muhiim! Dayax gacmeedku ma awoodi doono in uu ku noolaado aag leh dabaqyo joogto ah ama dabayl.
Maadaama aysan jirin rag iyo dumar labadaba geedka, uma baahnid in aad raadisid laba-xabbadood oo xayawaan ah faafinta abuurka. Soo saarista waxaa la sameeyaa guga, in ka badan ama ka yar diirimaad April, ama la wareejiyo dhammaadka August, ama bilowga bisha Oktoobar.
Haddii aad rabto inaad dhirato dhir kala duwan, ka dibna u fiirso masaafada ugu yar ee u dhaxaysa iyaga - aan ka badnayn hal mitir iyo badh iyo ugu yaraan 8 sentimitir.
Geedo sanadle ah ayaa ka fiican in lagu garto cayayaanka si dhakhso ah, tan iyo dhirta ay adag tahay in lagu xakameeyo xubnaha. Waa lagama maarmaan in la qodo dalool 80 centimitir oo qoto dheer.
Waa muhiim in la fiiriyo carrada. Dareemaha ayaa dareema in ay ka fiican yihiin carrada si fiican loo bacrimiyo iyo bacrin ah, oo ciid ah had iyo jeer joogta. Qodobka loogu talagalay isku dhafka ciidda ee wanaagsan waa sidan soo socota:
2 qaybood oo dhul ah;
2 xabbo oo ciid ah;
Qayb ka mid ah dhulka waa caleen.
Sidoo kale godad kasta waa lagama maarmaan in la dhigo bacriminta macdanta ee qiyaasta aan ka badnayn 20 garaam.
Si aad uqabsoomo si aad u heshid ishaada muddo dheer iyo qurxinta beerta, waa inaad ka taxadartaa. Geed berbera ah waa mid xasaasi u ah dhaxan, si ka duwan kuwa caanka ah, sidaas darteed waa in la daboolo xilliga qaboobaha.
Waxaa lagugula talinayaa inaad tan sameyso sanadaha ugu horeeya, iyadoo ku xiran jawiga aaggaaga. Peat waa ku fiican tahay jiilaalka, iyo guga waa in ay ahaato otgresti iyo gelin spruce ah oo ka ilaaliya caleemaha ka soo rucubada scorching ee qorraxda.
Waraabinta waa nidaam muhiim u ah tsugi. Waxay ku noolaan kartaa oo kaliya carrada si fiican u qoyan. Laakiin waa inaadan daadin geedkii. Xisaabinta qiyaastii hal qof oo qaangaar ah oo ka weyn 10 sano waa 1 baaldi asbuucii. Qoyaanka waa in lagu hayaa oo kaliya ciidda, laakiin sidoo kale qaybta anteenada. Hawada qallalan waxay burburin kartaa geed. Sidaa darteed, 30kii maalmoodba mar waxaad ku cabbi kartaa tuubada tuubada.
Waa muhiim! Xilliga kulaylka waxaad u baahan tahay inaad kordhiso inta jeer ee lagu waraabiyo ilaa 2 ama 3 jeer usbuucii, iyo sidoo kale geedaha xoqaya.
Sannadaha ugu horeeya ka dib markii la beero, waa in ciidda ay wanaagsan tahay oo bacrimiyadu ay ku taal, Xugu uma baahna in la bacrimiyo. Sababtoo ah waxay u adeegi doontaa sida dhar gogol ah oo ciriiri ah oo iskood u jarjaraya.
Si aad u ilaaliso dhirta caafimaad leh iyo xooggan, waxaad sameyn kartaa mulching. Peat ayaa ugu fiican tan. Heerka sare ee lakabka sare ee maskaxdu waa inuu u dhexeeyo 3 ilaa 5 sentimitir.
Wakhti ka dib waad dabacsanaan kartaa carrada, laakiin waa inaadan aadin qoto dheer oo ka badan 10 sentimitir.
Mid ka mid ah xanuunka halbowlaha ah ee ku dhufan kara waa caarada caarada. Si looga takhaluso, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro dhammaan laamihii ay saameeyeen cayayaanku, iyo geedka ku dhaqi labadii maalinba mar.
Baro sida loola macaamilo cayayaanka dhoobada.
Inta badan, nidaamyadan sahlan ayaa ku filan, laakiin haddii natiijada la filayo aan la gaarin, waxaa haboon in la iibsado kiimikada dukaanka khaaska ah - acaricides si loo burburiyo arachnids.
Marka laga soo tago calaamadda, dhuumaha qaarkood waxay ku dhacaan boodhyo boob ah iyo cayayaan qiyaas ah.
Haddii aad geed badan ku shubtid, waxaad heli kartaa cudur sida xoqitaanka nidaamka asaasiga ah, kaas oo 99% kiisaska keena dhimashada geedka.
Ma taqaanaa? Maraq ka soo jilicsan ee tsugi waxay u adeegtaa daawo si loo joojiyo dhiigbaxa, iyo sidoo kale inuu bogsiyo dhaawacyada kala duwan iyo dhaawacyo kale oo maqaarka ah.
Codsiga naqshada muuqaalka
Dhammaan noocyada lagu qoray buuggan waxaa loo isticmaali karaa sida qurxinta qurxinta ee beertaada.
Dareeruhu wuxuu ku habboon yahay isticmaalka nashqadda muuqaalka leh kala duwan: Waxaa jira ikhtiyaaro sare iyo kuwo wax lagu duubo, cagaaran dhalaalaya oo leh talooyin qurux badan, iyo sariiro qoto dheer oo cirbad buluug cagaaran ah. Sidaa daraadeed, halbowlaha ayaa si weyn u eegi doona bartamaha beerta qaabka geed dheer oo leh qaab pyramid ah, iyo sidoo kale naqshad qurxinta dhagax hoose oo hooseeya leh dhir kale.
Hadda waxaad taqaanaa sida loo qurxiyo beertaada. Quruxda iyo aromaska ​​ee cajiinka, sida qoryaha kale oo qoryo ah, ayaa dhab ahaantii u qalma dadaalka.
Si kastaba ha ahaatee, xusuusnow in ay muhiim u tahay in geed lagu dhajiyo meesha saxda ah, si taxadar leh u bixiso carrada iyo daryeelka geedka.